सबैभन्दा महँगो मैथिली चलचित्र ‘प्रेमक बसात’ को ट्रेलर तथा गीत सार्वजनिक – Medianp
शुक्रबार, ०३, फागुन, २०७५
सबैभन्दा महँगो मैथिली चलचित्र ‘प्रेमक बसात’ को ट्रेलर तथा गीत सार्वजनिक
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, असार २७, २०७५१०:१३0
काठमाडौं, २७ असार । मैथिली भाषाको सबैभन्दा महँगो चलचित्र ‘प्रेमक बसात’को ट्रेलर तथा गीत सार्वजनिक गरिएको छ । भारतको मुम्बईमा निर्माण भएको ‘प्रेमक बसात’ प्रेमकथामा आधारित चलचित्र हो ।
हिन्दु मुस्लिमले एक अर्कासँग बिहे गर्दा आइपर्ने सामाजिक समस्यामा आधारित चलचित्रमा नेपालका मोडल पियूष कर्णको मुख्य भूमिका रहेको छ । सह–कलाकारको रुपमा कोलकत्ताकी चर्चित नायिका रैना बेनर्जीले अभिनय गरेकी छन् । भारतका चर्चित गायक आदित्यनारायण र तोची रैनाले मैथिली चलचित्रको गीतमा पहिलोपटक आवाज भरेका छन् ।
वेदान्त झाले निर्माण गरेको चलचित्रको लेखन तथा निर्देशन रूपक सरारले गरेका हुन् । संगीत सरोज सुमन, प्रवेश मल्लिक र एस कुमारको रहेको छ । जेएनके इन्टरटेन्टमेन्टको ब्यानरमा एक करोड लगानीमा निर्मित चलचित्रलाई नेपालका विभिन्न सहरसहित भारत, दुबई, कतार अस्ट्रेलियालगायत स्थानमा एकैसाथ रिजिल गर्ने तयारी रहेको निर्माण युनिटले जानकारी दिएको छ ।
चलचित्रको आइटम गीत ‘ललमुनियाके ताडी’ मा नायिका नम्रता सापकोटाले पनि नृत्य गरेकी छन् । चलचित्रको सम्पूर्ण गीत संगीतलाई भारतकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी टी सिरिजले बजार व्यवस्थापन गरेको हो । आगामी अगस्ट १ तारिखमा काठमाडौंमा विशेष च्यारिटी शो गरिने भएको छ ।
चलचित्र ‘कहीँ कतै’ ट्रेलर रिलीज (भिडियो)
विश्वकपबाट कसरी छुट्यो रसियाको फुटबल ‘क्रेजी’ सहर क्रासान्डार ?
महिला आफैमा कसरी शक्तिशाली हुन सक्छिन् !
दुई वर्षमा ४० मुलुक घुमेर विश्वमै चर्चामा छन् नेपाली दम्पती संगम र शिखा
बग्गी चढाएर यसरी भित्राएँ संजोगले वर्षालाई.., (भिडियोसहित)
यसकारण भएको रहेछ चर्चित गायिका नेहा र प्रेमी हिमांश बीच ब्रेकअप
तस्वीरकै कारण बलवान ठानिएका सुनिललाई तस्वीरले नै जुराएको थियो फिल्म खेल्ने अवसर
चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को टिजर सार्वजनिक
यी हुन् भारतीय उद्योगपति मुकेश अम्बानीकी हुनेवाला बुहारी, छिन् निकै सुन्दर (तस्विरसहित)
साउथ सुपरस्टार महेश बाबूले रचे इतिहास, आजसम्म कुनै पनि कलाकारले गरेका छैनन् त्यो काम
आखिर के हुन्छ उखुमा ? यस्ता छन् रस पिउनुको महत्वपूर्ण फाइदा !
१४ करोडको चिठ्ठा जितेका युवकले पुरस्कार थाप्दा किन लगाए माक्स ? यस्तो छ वास्तबिक रहस्य
बिहे भएको २ महिना नहुँदै पेट लाग्न थालेपछि अभिनेत्री प्रियकां चोपडा गर्भबती भएको हल्ला सुरु
माओवादीले यसरी ल्याउँथ्यो भारतबाट जनयुद्धका लागि हतियार ! खुल्यो रहस्य !
हेर्नुहोस् ! यस्तो हुन्छ सफल महिलाको उत्कृष्ट बानी !
पुरुषको लिङ्गको आकार बढाउने सजिलो तरिका ! तरिका सहित
विश्वकै अनौठो जंगल जहाँ पुगेका कोही फर्किदैनन् ! तर त्यहि जंगलमा हराएका एक बालक ७२ घण्टापछि जिवितै फर्किए !